EVY's Kitchen: Pad Siew ( ယိုးဒယားခေါက်ဆွဲကြော်)
ဒီခေါက်ဆွဲကြော်ကတော့ ယိုးဒယားခေါက်ဆွဲကြော်တစ်မျိုးပါ။ မူရင်းကတော့ အမဲသားနဲ့ ကြော်တာဖြစ်ပြီး ကျွန်မကတော့ ကြက်သားနဲ့ ပြန်ကြော်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာနှစ်သက်တယ် ဆိုရင်လည်း ပုစွန်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အသီးအရွက်အနေနဲ့ ဘရိုကိုလီပါဝင်ပြီး အချိုနဲနဲကဲပြီး စားလို့တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။ ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲကြော်ကို တစ်မျိုးဆန်းသစ်ထားတာပေါ့။ (တကယ့်မူရင်းခေါက်ဆွဲကတော့ ဆန်ပြားအကြီးကြီးတွေပါ။ ဒီမှာတော့ ပုံမှန် ဆန်ပြားဆိုဒ်ပဲ ရှာတွေ့လို့ အဲဒါနဲ့ပဲ ကြော်လိုက်ပါတယ်)
ခြစ်ထားသော ဂျင်း - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ
ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာ - နုတ်နုတ်စဉ်း
ကြက်သွန်နီ အသေး ၁လုံး နုတ်နုတ်စဉ်း
တရုပ်ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငါးငံပျာရည် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပဲငံပျာရည် အနောက် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ထန်းလျက် အသေး၁ ခဲ (ကြိတ်ထားပါ)
ငရုပ်ကောင်း လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ထက်ဝက်
အမဲသား (သို့) ကြက်သား ၁၅၀ ဂရမ်ကို ဟင်းခပ်ပစ္စည်းများအားလုံးနဲ့ ရောမွှေထားလိုက်ပါ
ဆန်ခေါက်ဆွဲအပြား ၄၀၀ ဂရမ်
ပဲငံပျာရည် အနောက်စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငရုပ်ကောင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ထက်ဝက်
1. ပထမဆုံးနှပ်ထားတဲ့ အသားတွေကို ဆီစားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက်နဲ့ ကြော်ပေးပါ။
2. နောက်ဘရိုကိုလီထည့်ပြီး ၂ မိနစ်လောက်နေရင် ကြက်ဥကိုဖောက်ထည့်ပေးပါ
3. နောက်ထပ် ၂ မိနစ်လောက်နေရင် ခေါက်ဆွဲတွေထည့်၊ ကျန်တဲ့ ဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီး ၄ မိနစ်လောက်သမအောင်မွှေကြော်ပေးပါ။
4. ဒါဆိုရင်တော့ အရသာရှိတဲ့ ယိုးဒယားခေါက်ဆွဲကြော် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ
Posted by Evy at 10:00 AM
ှဗိုက်ဆာနေတာနဲ့ အတော်ပဲ :)
မ မရှိတုန်းတိတ်တိတ်လေးလေ :P
hti yout said...
Thanksalot for mouth watering Ur appetizing foods,, but the Pad Siew,the way you cooking is not the right way,,its mean that not the Thai cooking style for that food,,, anyhow - anyway Ur afford to sharing for other people are very appreciated.. Thanks again Miss...God bless U..